Ma waxaa ka dambeeya bixinta korontada?
Hakinta gudoomiyaha ee ka hortaga korantada, gaaska dabiiciga ah iyo xirida biyaha ayaa dhamaaneysa 30ka Sebtember, 2021.
Haddii aad dib uga dhacday lacag bixinta korantada, waxaad haysataa waqti aad ku bilowdo raadinta kaalmada korantada. Marka hore, eeg macluumaadka hoose ee ku saabsan LIHEAP, ka dibna booqo annaga gargaarka korontada bogga wixii macluumaad dheeraad ah.
Bixinta lacagaha laga helo barnaamijka deeqda baloogga federaalka si looga caawiyo qoysaska gobolka Washington ee dakhligoodu hooseeyo inay ilaashadaan adeegyo koronto oo la awoodi karo, lagana yaabo inay ka gooyaan.
LIHEAP waxay caawimaad xagga tamarta ah siisaa qoysaska ku nool Washington iyadoo loo marayo shabakad ka kooban hay'adaha waxqabadka bulshada iyo la-hawlgalayaasha maxalliga ah. Ururradan maxalliga ah ayaa kaa caawin doona inaad go'aamiso haddii aad u-qalanto iyo inta caawimaad ee aad heli karto. Haddii aad u-qalanto, hay'addaada LIHEAP ee deegaankaaga ayaa si toos ah lacag ugu soo diri doonta adeeggaaga tamarta iyadoo ka wakiil ah reerkaaga.
LIHEAP waxay ugu horreyn caawisaa qoysaska iyada oo si toos ah u siisa deeqda kaalmada tamarta bixiyaha tamarta iyada oo ka wakiil ah qoyska u qalma. LIHEAP waxay kaloo kaa caawin kartaa dayactirka ama beddelka hab aan ku habboonayn, ku -shaqaynta, iyo/ama kuleylka ama nidaamka qaboojinta aan shaqaynayn xaaladaha qaarkood. Qoysaska xaqa u leh LIHEAP waxay sidoo kale u qalmi karaan in guryahooda laga dhigo kuwo tamar fiican leh iyada oo loo marayo Barnaamijka Cimilada.
U-qalmitaanka wuxuu ku saleysan yahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan dakhliga qoyska, tirada reerka iyo kharashyada kuleylka. La xiriir hay'addaada maxalliga ah ee LIHEAP adigoo gujinaya khariiddada hoose si aad uga dalbatid caawimaad dhaqaale LIHEAP.
Halkan guji si aad u aragto khariidadda gobolka oo aad xulo degmada aad ku nooshahay. Taasi waxay ku tusi doontaa macluumaadka xiriirka wakaaladda aaggaaga ah iyo tilmaamaha jadwalka ballanta LIHEAP.
Haddii aad degan tahay Washington, reerkaagu ma helin deeqda LIHEAP inta lagu jiro sanadka barnaamijka socda (Oktoobar-Sebtember), qoyskaaguna wuxuu la kulmaa tilmaamaha dakhliga ee barnaamijka, markaa waad u-qalmi kartaa LIHEAP. Xadka dakhliga waxaa loo dejiyay 150% heerka saboolnimada federaalka (FPL) waxaana laga yaabaa inuu ku yaal meesha Tilmaamaha U-qalmitaanka (PDF) bogga. Macluumaadka u-qalmitaanka ee ku yaal boggan waa hage keliya. U-qalmitaanka waa in lagu go'aamiyaa iyada oo loo marayo bixiyahaaga LIHEAP ee deegaankaaga. Ka hel adeeg-bixiyaha aaggaaga bogga "Sida Loo Codsado", oo ballanta ballanta maanta.
LIHEAP waxaa ugu horeyn loo isticmaalaa in lagu caawiyo qoysaska deeqda kululaynta oo hal mar si toos ah loo siiyay bixiyaha tamarta. Barnaamijka hadda waxaa ku jira adeegyada qaboojinta. Xaaladaha qaarkood, barnaamijkeenna ayaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo dayactirka ama beddelidda kuleyliyaha ama nidaamka qaboojinta oo aan ammaan ahayn, oo aan shaqayn, iyo/ama aan shaqaynayn.
LIHEAP kaliya maahan barnaamijka kaalmada tamarta ee laga helo Washington. Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha tamarta ee gobolka oo dhan waxay maamulaan barnaamijyadooda kaalmaynta tamarta iyo / ama waxay siiyaan qiimo dhimis qaas ah macaamiisha aqoonta leh. Qaar ka mid ah barnaamijyadan waxaa loogu talagalay si la mid ah barnaamijka LIHEAP waxaana lagu bixiyaa isla hay'adaha bixiya barnaamijkaaga LIHEAP ee deegaankaaga.
Si aad u codsato LIHEAP, waa inaad ballan ka qabsataa bixiyaha LIHEAP ee bulshadaada. Hay'ad kastaa waxay leedahay hanaan u gaar ah oo loogu talagalay jadwalka ballamaha. Waa inaad raacdaa nidaamka jadwalka u gaarka ah wakaalada deegaankaaga. Wasaaradda Ganacsiga ma jadwaliso ballamaha. Waxaad kaheli doontaa bixiyaha LIHEAP aaggaaga qeybta "Sida loo Codsado" qaybta kore.
Waxaad codsankartaa oo keliya LIHEAP hal mar sanadkiiba. Sanadka barnaamijku wuxuu soconayaa Oktoobar 1 illaa Sebtember 30.
Haa, waxaad u baahan doontaa inaad keento dukumiintiyo si aad u hesho deeqda 'LIHEAP'. Dukumiintiyada la codsaday way ku kala duwanaan karaan bixiyaha LIHEAP. Hubso inaad ogaato dukumiintiyada aad u baahan tahay kahor ballantaada jadwalka ah. Caadi ahaan, waxaa lagu weydiin doonaa inaad diiwaangeliso aqoonsigaaga, joogitaankaaga, kharashyada kuleylka iyo dakhligaaga.
Qadarka lacagta la siiyay qoyskaaga waxay ku xirnaan doontaa arrimo badan. Tusaale ahaan, cabirka qoys walba, daqligiisa, iyo kharashka kuleylka sanadlaha ah waxay saameyn ku yeelan doontaa qadarka deeqdooda LIHEAP. Waa inaad jadwal la sameysid bixiyaha bulshadaada si aad u ogaato inta aad heli karto.
Xaaladaha badankood, ma heli doontid lacag-bixin toos ah. LIHEAP waxay had iyo jeer si toos ah u bixisaa deeqaha si toos ah korontada. Xaaladaha qaarkood, deeqda 'LIHEAP' waxaa laga yaabaa in si toos ah loogu siiyo qoys halkii laga siin lahaa tamar-bixiyaha, laakiin taasi waa wax aan caadi ahayn.
LIHEAP waxay rabtaa inay qof walbo ka warqabto khayaanada ka socota Oregon. Khayaanada ayaa dadka la xiriirta oo ku wargalinaysa in si aan kala sooc lahayn loogu xushay inay ka faa'iideystaan ​​LIHEAP, waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaanna waa inay raacaan iskuxirka la bixiyay. Xidhiidhku wuxuu ku weydiisanayaa aqoonsiga shakhsi ahaaneed, nuqulada aqoonsiga sawirka iyo lambarka amniga bulshada. Marka la gudbiyo, wicitaan ayaa xigta oo la weydiistaa bangiga iyo macluumaadka wadada si loo bixiyo lacagta.
LIHEAP ee Washington weligiin weydii macaamiisha bangiyada iyo macluumaadka marintooda. Taabadalkeed, LIHEAP ee Washington waxay si toos ah lacag uga siisaa koontooyinka macaamiisha korontada.
Dukumintiyada iyo Kheyraadka Barnaamijka
QORAALKA 2022 LIHEAP Qorshaha Gobolka (PDF)
Qorshaha Gobolka 2021 ee LIHEAP (PDF)
HHS LIHEAP Bogga Hoyga (shabakad)
Sharciga LIHEAP (shabakad)